VOLAHAINGO MARIE THÉRÈSE : Neken’ny Hcc ny hiverenany eny Tsimbazaza
Miverina ho depiote ao Tsimbazaza indray ny Minisitra teo aloha, Volahaingo Marie Thérèse. 11 février 2020
Navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana, omaly ny didy laharaha faha : 02-HCC/AR milaza ny andinindinin’izany. Araka izany, mitsahatra hatreo koa ny maha solombavambahoaka an’i Ravenasy Jean Emanielson, izay nisolo toerana vonjimaika an’i Volahaingo Marie Thérèse tao Tsimbazaza, nandritra ny fotoana naha mpikambana tao amin’ny governemanta an’ity farany, ny 24 jolay 2019 ka hatramin’ny 25 janoary 2020 lasa teo.
Tsiahivina hatrany fa solombavambahoaka voafidy tao Bealanana, avy amin’ny alalan’ny vovonana IRD izy ary voatendry ho Minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arak’asa tao amin’ny governemanta Ntsay Christian. Nahazo ny isam-bato 38,54% nandritra ny fifidianana depiote ary nandresy ireo kandida miisa telo mpifaninana taminy tao amin’ny Distrikan’i Bealanana. Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa kosa no minisitra vaovao notendrena handimby azy ny 29 janoary 2020 lasa teo.
Feno tanteraka, araka izany ny seza ao amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza raha toa ka banga toerana maromaro izany teo aloha. Ankoatra ity depiote ity mantsy dia nosoloina ihany koa ny toeran’ny Depiote Hasimpirenena, voafidy tao amin’ny Distrikan’i Fandriana sy ny toeran’ny Depiote Leva, voafidy tao Mahabo. Ireto farany izay mbola manana raharaha any amin’ny Fitsarana no sady voatazona am-ponja.